यो प्रेस मा treasured पासा एक उपलब्धि मानिसहरूको मात्र होइन बहुमत, तर पनि महिला हो भनेर कुनै गोप्य छ। इच्छित शारीरिक आकारमा आफूलाई राख्न तपाईं जिम मा वा घरमा जिम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर, मान्छे सधैं तत्काल परिणाम भर गर्छन, र यो प्रश्न बारे धेरै चिन्तित छ तपाईं प्रेस माथि पंप कसरी धेरै घन गर्न। कुनै एकल जवाफ अवस्थित छैन छ। प्रत्येक व्यक्ति विशुद्ध व्यक्तिगत र इच्छित परिणाम प्राप्त शारीरिक संकेतक धेरै कारक मा निर्भर गर्दछ। राम्रो शारीरिक गतिविधि र उचित पोषण मोड संग पम्पिंग प्रेस औसत मा घन यो बारेमा 2-3 महिना लाग्छ।
तपाईं प्रशिक्षण सुरु गर्नु अघि, तपाईं प्रेस माथिल्लो र तल्लो, र विभाजित छ के जान्नु आवश्यक obliques। प्रत्येक साइट, त्यहाँ केही अभ्यास हो। तपाईं माथिल्लो पंप कसरी रुचि राख्नुहुन्छ भने घन प्रेस, यो शरीर हुर्काउन ध्यान गर्नुपर्छ। झुकन र रक obliques घुमाई सबै प्रकारका, तर महिला किनभने मांसपेशिहरु वृद्धि भएको कमर बढाउन सक्छ त्यस्तो अभ्यास मा मुछिन हुँदैन। यो तिनीहरूलाई भारित hula घेरा संग कब्जा प्रतिस्थापन गर्न राम्रो छ, यो पक्षलाई बोसो हटाउन मदत र चिल्लो मोड्नु बहाना हुनेछ। देखिने परिणाम यो कम्तिमा 30 प्रत्येक तरिका मिनेट को लागि एक हप्ता 3-4 पटक मोड गर्नुपर्छ हासिल गर्न। तर खुट्टा उठाने राम्रो कसरत तल्लो प्रेस प्रदान गर्नुहोस्।
के तपाईं घन गर्न प्रेस माथि पंप कसरी धेरै प्रश्न बारे गम्भीर चिन्तित हुनुहुन्छ भने, यो सेट र प्रतिनिधि संख्या नजिक ध्यान लायक छ, तर यहाँ कुनै परिभाषित मानक हो। यो सबै आफ्नो शारीरिक फिटनेस मा निर्भर गर्दछ। केही 50 पुनरावृत्तिकोसङ्ख्या लागि वास्तविक trifle अरूलाई जस्तो, र र 10 एक बोझ हुनेछ। परिणाम हासिल गर्न यो प्रेस खण्ड मार्फत मांसपेशी दुखाइ काम ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। व्यायाम को शुरुवात पछि समय पछि, तपाईं मांसपेशिहरु जल, तर धारिलो दुखाइ महसुस हुनेछ। तपाईं आफ्नो प्रेस भित्रबाट "बल्न" भनेर, यहाँ मुख्य कुरा रोक्न र अर्को 5-10 पटक गर्न छैन भन्ने महसुस। आखिर, यी अन्तिम पुनरावृत्तिकोसङ्ख्या सबैभन्दा मूल्यवान छन्। दृष्टिकोण निम्न बाँकी एक क्षण हुन र अर्को लागि अघि बढ्नु गर्न सक्नुहुन्छ। कुल 4-5 सेट गर्दै लायक। मानव शरीर मा सबै मांसपेशिहरु राम्ररी पढ्नु तल्लो प्रेस संग किन खडा छ र बिस्तारै शीर्ष उत्प्रेरित छ जो तल माथि देखि झूल कि भूल छैन।
तपाईं घन गर्न प्रेस माथि पंप कसरी धेरै बारे कुनै कोच सोध्नुहोस्। न त सही जवाफ दिन थियो। सबै आफ्नो आफ्नै प्रयासमा निर्भर हुनेछ, र यो प्रशिक्षण को मात्र होइन तीव्रता, तर पनि आहार छ। कुनै कुरा तपाईं आफैलाई कुनै पनि व्यायाम यातना कति, उनीहरूले क्युटेनियस बोसो को एक मोटी पत्र अन्तर्गत लुकेको नभएसम्म कहिल्यै आफ्नो लामो-प्रतीक्षा घन देख्नेछन्। यो एक सख्त आहार मा बस्न र जीवनको सबै सुख आफैलाई खोस्नु छ मतलब छैन। बस सरल नियमहरू पालन:
सानो अंश खान, तर एक दिन 5-6 पटक। यो शरीर गरेको चयापचय बढाउने र बोसो को प्राकृतिक बलिरहेको गति अप गर्न आवश्यक छ।
तरल पदार्थ प्रशस्त पिउने। हामी सादा पानी, प्राकृतिक रस र हरियो चिया बारेमा कुरा गर्दै छन्। तिनीहरूले एकदम चयापचय बढाउने।
मिठाई आफैलाई सीमित छैन, तर केवल दिन को 12 घण्टा। कार्बोहाइड्रेट र समय सम्म कार्यरत चीनी को आंकडा प्रतिबिम्बित हुने छैनन्, त्यसको विपरीत, ऊर्जा को रूप मा लाभ हुनेछ।
भद्दा गहुँ देखि रोटी र पेस्ट्री जानुहोस्। यस्तो उत्पादनहरु कम कार्बोहाइड्रेट र थप प्रयोग गर्न योग्य फाइबर मा।
ध्यान प्रोटिन मा धनी खाद्य पदार्थ। दिउँसो बोसो र कार्बोहाइड्रेट खाना को अत्यधिक खपत जोगिन।
पछिल्लो भोजन सुत्नेसमय अघि4घण्टा भन्दा कुनै पछि हुनुपर्छ। त्यसपछि तपाईं खान भनेर, समय सबै पचा लिया जान्छ र अतिरिक्त किलोग्राम र सेन्टिमिटर को रूप मा रात को लागि सौतेली हुन सकिन्छ।
फैलाउन misconception कि दैनिक व्यायाम परिणाम हासिल गर्न सक्नुहुन्छ छिटो। एक अक्सर प्रश्न सुन्नुहुन्छ: "कति तपाईं पंप गर्न सक्नुहुन्छ ? प्रेस घन गर्न, सम्झौता भने हरेक दिन संग" यो पेट मांसपेशीमा ठीक गर्न आवश्यक छ कि थाहा महत्त्वपूर्ण छ। बाँकी दिनमा मात्र त्यहाँ निर्माण-अप मांसपेशी ठूलो र मात्रा को छ। यो कारणले गर्दा प्रशिक्षण समयमा प्राप्त सूक्ष्म को भरने हुन्छ, त्यसैले 3-4 पटक एक हप्ताको पर्याप्त हुनेछ। यस्तो लोड, र राम्रो खाना चाँडै नै एक पोषित घन घमण्ड गर्न सक्षम हुनेछ छ।
कसरी5किलो द्वारा गत महिना मा वजन गर्न? कसरी स्वास्थ्य गर्न हानि बिना वजन गर्न
5 खाद्य पदार्थ तपाईं वजन गर्न खान सक्दैन। कसरी सामान्य वजन राख्न
घर मा एक सरल व्यायाम कार्यक्रम
भ्रम वा वास्तविकता: शरीर मा बोसो जला खाद्य पदार्थ?
Tsiperus: हेरविचार र प्रजनन
रोग सिस्टिक फाइब्रोसिस। यो के हो?
को फ्लास्क हुक्का कसरी चयन गर्ने?
वास्तविक पैसा लगानी बिना पैसा अनलाइन